နောက်ဆုံးပေါ်အခမဲ့ LEGO Ideas set offer ကတော့ရနိုင်သေးတယ်
01 / 08 / 2021 01 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 466 Views စာ0မှတ်ချက် ၂၁၃၂၈ Seinfeld, 40487 Sailboat စွန့်စားမှု, စာချုပ်, အပေးအယူ, အခမဲ့, အခမဲ့လက်ဆောင်များ, အခမဲ့ LEGO, ဝယ်ယူမှုနှင့်အတူလက်ဆောင်, GWP, Ideas, Lego, lego သဘောတူညီချက်, lego အပေးအယူ, ဝယ်ယူမှုနှင့်အတူ Lego လက်ဆောင်ပေးမယ်, Lego GWP, Lego Ideas, Lego ကမ်းလှမ်းချက်, LEGO ကမ်းလှမ်းမှု, ပေးကမ်း, ကမ်းလှမ်းချက်များ
မှနောက်ဆုံးဖြည့်စွက် Lego Ideas အခြားတစ်ခုတွင် stock ကျန်သေးသည် အသစ်အစုံ တရားဝင်အွန်လိုင်းစတိုးတွင်အမြန်ရောင်းထွက်ခဲ့သည်။
Lego Ideas 40487 Sailboat Adventure သည် VIP အဖွဲ့ဝင်များအတွက်အစောဆုံးလက်လှမ်းမီသောကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးအသစ်ဖြစ်ပေါ်စေသောသြဂုတ် ၁ စျေး ၀ ယ်သူများအကြားတွင်ဘေးကင်းစွာမျှောနိုင်ခဲ့သည်။ Star Wars: Mandalorian မော်ဒယ်ကမြန်မြန်ရောင်းထွက်သွားပြီ။
လွန်ခဲ့သော Lego Ideas လက်ဆောင်ဝယ်ယူခြင်းဖြင့်တည်ဆောက်သည်၄၀၄၄၈ Vintage Car အပါအ ၀ င်၊ အထူးသဖြင့်လတ်ဆတ်သောအစုံများစတင်ထုတ်လုပ်သောအခါအထူးသဖြင့်ရောင်းအားသည်လျင်မြန်စွာရောင်းထွက်ခဲ့သည် LEGO.comသူတို့မကြာသေးခင်ကလုပ်ခဲ့သလိုပဲ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း.
minifigures နှစ်ခု၊ အသေးစိတ်သင်္ဘောတစ်စင်းနှင့်အုတ်များတည်ဆောက်ထားသောရေမှလျှံထွက်နေသောသေးငယ်သည့်အကောင်များနှင့်အတူ ပြိုင်ပွဲအနိုင်ရ model တစ်ခုအတွက်အမြင့်ဆုံးစျေးနှုန်းသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုပါ ၀ င်သည် Lego အပိုင်း ၃၃၀ ပါ ၀ င်သောဖန်တီးမှု၏အရွယ်အစားကြောင့်ယနေ့အထိမြှင့်တင်ရေး
Lego Ideas 40487 Sailboat Adventure သည်တရားဝင်အွန်လိုင်းစတိုးတွင်ရောင်းမထွက်သေးသော်လည်း VIP အစောပိုင်းသုံးခွင့်သည်သြဂုတ်လ ၄ ရက်အထိသာရရှိနိုင်ပြီး၎င်းနှင့်လူတိုင်းအတွက်သဘောတူညီချက်ရရှိလိမ့်မည်။
200 200 / $ 200 / requirement 1 လိုအပ်ချက်ပြည့်မီရန်သြဂုတ်လ ၁ ရက် မှစ၍ များစွာသောမော်ဒယ်များစတင်ဖြန့်ချိခဲ့သောကြောင့်မော်ဒယ်များစွာသည်ပြသနာမဟုတ်တော့ပါ။ Lego Ideas တည်ဆောက် - ၂၁၃၂၈ Seinfeldမရ။ သင်၏အမှာစာကိုစုရန်ဖြစ်နိုင်သည် အခြားအပေးအယူ လက်ရှိနေထိုင်သည် LEGO.comတစ်ဦးအပါအဝင် Marvel ပိုးအိစံ.
← Lego Star Wars 75309 Republic Gunship - သင်မသိသောအရာခြောက်ချက်
Lego Marvel 76200 Bro Thor's New Asgard သည်လျင်မြန်စွာရောင်းထွက်သွားသည် →